Qaybta 1.What dhacaya marka la tirtiro file a on WordPress iyo meesha aanu wax u dhaceen?
Qaybta 2.How inuu ka soo kabsado files tirtiray ka WordPress lagu rakibay on your computer
Qaybta 3.How inuu ka soo kabsado files tirtiray internetka ee WordPress
Qaybta 4.Tips & Tricks for files badbaadinayo on WordPress si looga fogaado khasaare xogta
Waa maxay mid ka mid ah faylka online ugu caansan kaydinta adeegyada maanta la heli karo? In badan oo naga mid ah jawaabi lahaa si wadajir ah in ay tahay DropBox. Waa in awood leh adeeg. Iyadoo qaar ka mid ah sifooyinka iyo fursadaha si hagaagsan iyo gurmad ugu fiican, WordPress waa ciidan si ay xisaabtamin in ganacsiga Kaydinta online.
Laga soo bilaabo barta dhamaadka user ah ee aragtida, waa in aad u ogolaanaya in ay wax aan aad caadi u ah iyo in ay tahay in aad la halmaami karin syncing faylasha aad iyo in la abuuro hayaan leh waqti ka waqti sida sameeyaa in ay u gaar ah. Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa in si fudud 'dhibic' kuwa files muhiim ah oo idinkaa iska leh ee folder DropBox aad.
qaybta 1 Maxaa dhaca marka la tirtiro file a on WordPress iyo meesha aanu wax u dhaceen?
Ever maleeyeen oo arrintan ku saabsan? Maxaa dhacaya haddii aad kor ku dhamaaday si qalad ah la tirtiro file ka folder DropBox aad? Maxaa dhacaya leh? Ma weligiis lumay? Waa hagaag, jawaabta su'aalaha oo dhan waa in ay faylka baabi'i doono hubaal ka folder DropBox aad si kastaba ha ahaatee waxa aan la lumay weligiis weli.
Oo tan iyo in ay kiiska, waxaa jira siyaabo sidoo aan dib ugu heli file tirtiray in aad folder DropBox. Waxaad arki waayo, dhammaan sifooyinka hodan in WordPress yimaado leh, sidoo kale waa caqli ku filan si ay u diiwaan isbedel kasta oo aad samaysay in aad folder ee 30 maalmood ee la soo dhaafay. Sidaas, waxa ay taasi ka dhigan tahay in aan kaliya sameeya DropBox ogolaado in aad dib u hesho ama dib u helidda faylasha aad laakiin sidoo kale versions badan oo kala duwan waxaa ka mid ah, inta ay u abuurmeen in 30-kii maalmood ee la soo dhaafay.
Haddii aad su'aal soo socda waa 'Sidee baad u sameeyaan in? ka dibna sii kaliya akhriska ilaa dhamaadka sida aynu ku saabsan in ay la wadaagaan tallaabooyinka ku lug leh soo kabsaday files tirtiray on WordPress kula jira.
part 2 Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka WordPress lagu rakibay on your computer
Habkani shaqeeyaa si la mid ah labada Windows iyo Mac.
Gal account DropBox aad u tagtaan inaad fursad u 'Show tirtiray files', ikhtiyaarka ah in aad arki doonto in folder kasta.
Riix Doorashadan oo ah 'Show tirtiray files' iyo waa in aad aragto oo dhan files la tirtiray ee 30-kii maalmood ee la soo dhaafay. Dhaqaaq dulqabo badan files kuwaas oo waa in aad arki fallaadh xaq u socda in files kuwaas, dhinaca gacanta midigta. Click iyo hoos u dhac ku hoos menu leh ikhtiyaarka 'Undelete' on muuqan doonaa.
Waxa kale oo aad ka arki lahaa in hoos u soo dhaadhacay menu sida kor ku xusan ku siinayaa fursad kale oo ah 'versions Previous'. Haddii aad guji ku yaal, WordPress wuxuu muujin doonaa qoraalkii xoojiyaa ee file in aad ku eegaan karo dooro markaas ka.
qaybta 3 Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray internetka ee WordPress
Log in aad xisaabta ku website WordPress iyo jaraa'id ikhtiyaarka ah 'Dhacdooyinka' ka dibna heli dhacdooyinka la deletions file badan oo guji xidhiidhinta u dhigma sida ku cad shaashadda hoose.
Bogga xiga, waxaad arki doontaa doorasho ah ee 'Soo Celinta files kuwaas'. Guji ku yaal oo aad mar kale lagu dari doonaa kuwa dhammaan faylasha tirtiray dib si aad u folder.
Waxa kale oo aad soo kaban karto, fayl iyo faylasha gaar ah oo ku saabsan website DropBox. Si aad u bilaabaan, jaraa'id icon ee qashinka kartaa in aad ka heli doontaa dhow bar raadinta. Waxay muujiyaan oo dhan files tirtiray ee 30-kii maalmood ee la soo dhaafay aad u. Hadda, aad tilmaami karo dhammaan faylasha aad rabto in la soo celiyo iyo click fudud on badhanka 'Soo Celinta' loo sameeyo.
Qeybta 4 Talo & Tricks for files badbaadinayo on WordPress si looga fogaado khasaare xogta
1. Ka dhig folder DropBox aad nadiif ah iyaga oo la siinayo magacyada kuwaas oo caawin doona in aad maamuli files si fiican, tusaale ahaan, u isticmaalaan sano ah sida magacyada u fayl DropBox aad. Waxaad iyaga laga yaabaa in amarka ka dibna sida 2014, 2015, 2016 iyo wixii la mid ah.
2. Isticmaal ikhtiyaarka ah Upload inta badan nidaameed sida marka aad geliyaan; WordPress abuurtaa nuqul ka mid ah oo run ah file ah in la uploaded taas oo aan kiiska la nidaameed.
3. Hubi in gurmad file a in aad ka shaqeeya offline si WordPress ayaa version ugu dambeeyay waxaa ka mid ah.
> Resource > Ladnaansho > 2 siyaabo inuu ka soo kabsado DropBox tirtiray files on Windows & Mac